Sida loo Hubi Haddii aad iPhone biyo Waxyeello ama aan
Ma aad iPhone runtii biyo u dhaawacan yahay? Haddii aadan hubin waxa ku saabsan, waxa aad ka eegi kartaa naftaada by ahaantii - adigoo tilmaamayaasha dareere aad iPhone ee. Waxaad iyaga ka eegi kartaa meelaha sida kaaga muuqata sawirka hoose. Marka iPhone ay soo gaareen biyaha, aad arki doonaa dhibic guduudan. Haddii aan, hambalyo! Your iPhone aan biyo burburay.
Fiiro gaar ah: Ha xusuusan inaad damiso iPhone markii tahay inaad hubiso tilmaamayaasha dareere aad iPhone.
Astaamaha caamka ah ee Burburka iPhone Biyaha:
Biyaha iyo cabitaanno kale si fudud u dhaawici kartaa iPhone. Nasiib darro, Apple ee damaanad ma daboolo burburka dareere ah. Taasi waa in la yidhaahdo, aad mas'uul ka ah marka iPhone waxaa waxyeeleeyeen biyo ah ama cabitaanno ah. Markaasuu inta iPhone waxaa dhaawici karo biyaha dhulka? Next, aynu wada arki qaar ka mid ah astaamaha caadiga ah.
Power iyo arrimaha bilowga ah: awoodin inay shid, si deg deg ah uga bilowdo ka dib markii uu ku soo jeestay oo ku saabsan, ama screen cad dhimashada.
Hardware failure: Gudoomiyaha uma shaqeeyo, makarafoonka waa naafo ah, ama iPhone kululaado.
Farriimaha digniinta: ". Oogin waa arrin aan ku xoojinay siyaada this" waxaad ka heli kartaa mid ama ka badan baadi fariimaha marka aad isticmaasho iPhone, sida "siyaada Tani lama sameeyo si ay ula shaqeeyaan iPhone" ama, iwm
Arrimaha Codsiga: Safari browser, email iyo barnaamijyo kale oo furitaanka iyo xidhitaanka degna.
Waxa Aad Sameyn Karto biyo Waxyeello iPhone A
# 1. Isla markiiba Power aad iPhone
Marka iPhone ahaa biyo burburay, ha u isticmaalin sida caadiga ah, waxa laga yaabaa in aad u hesho kulayl iPhone dambe oo dhaawici aad iPhone ee hardware. Just hesho iPhone ka biyo iyo waxa ay awood off isla markiiba.
# 2. Ha u qalajin la timo engejiye
Ha isku dayin inaad wada qallajin doonaa biyo aad u burburay iPhone la timo engejiye ama mashiinka kale qalajiyo dibadda. Tani waxay ku qasbi karaan biyo qoto dheer galay aad iPhone. Waxaad dooran kartaa in aad ku rid weel oo bariis ah ceedhin u dhawr maalmood si ay u qalalaan, ama waxay qaadan dukaanka dayactirka.
Fiiro gaar ah: Marka aad qorshaynayso in biyo aad u burburay iPhone cusboonaysiiyey, waxaa jira liiska buuxa si aad u doorato habka ugu fiican ee aad iPhone.
# 3. Xogta iPhone aad ee kaabta
Marka iPhone waa qallalay, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo waxaa ay kor u taageerto xogta ku saabsan iPhone. Haddii aad isticmaali kartaa Lugood ama iCloud si aad u hesho ilaa waxaa taageeray, kaliya waxa ay sameeyaan ka hor inta aadan samayn baaritaan buuxa oo ku saabsan iPhone. Ma ogid waxa dhici doona mustaqbalka.
Kaabta aad iPhone via Lugood: Isku aad iPhone oo ay maamulaan Lugood. Markaas xaq guji magaca iPhone iyo dooran "kaabta". Lugood kartaan gurmad aad iPhone in dhowr daqiiqo.
Kaabta aad iPhone via iCloud: Tag Settings> iCloud (calaamad halkan haddii aad ka soo bixi)> Back Up Hadda.
Kaabta aad iPhone la Dr.Fone ee macruufka
Haddii aadan kartaan gurmad biyo aad u burburay iPhone la Lugood ama iCloud, ma noqon argagax. Waa wax iska caadi. Mararka qaarkood, iPhone u baahan yahay ka soo celiyo in ay sameeyaan is-ilaalinta. Under xaaladdaan, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) , kaas oo kuu ogolaanaya in aad si toos ah baarista iPhone si aad u hesho dhammaan macluumaadka ka soo baxay waxaa ka mid ah. Waxaa jirta fursad noocan oo kale ah. Waa maxay sababta aan lahayn isku day ah? Version ayaa maxkamad hoos ku qoran waa lacag la'aan.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone oo iskaan
Marka hore, baxdo Lugood haddii aad u ordaya on your computer. Markaas xiriiriyaan iPhone in computer iyo ordi Dr.Fone ee macruufka. Marka iPhone la ogaado, aad arki doonaa suuqa kala sida ku cad xaq.
Fiiro gaar ah: Haddii ay taasi ma shaqeeyaan, u iPhone 4 iyo dadka isticmaala iPhone 3GS, waxaad isku dayi kartaa in ay isticmaalaan "Advanced Mode" iyada oo loo marayo badhanka hoose ee suuqa kala. Waxa aad bixisaa hab kale si aad u hesho iPhone la marsiiyey, xataa marka aad iPhone waxaa ku shaqeeya off.
Tallaabada 2. xogta Kulanka Xiisaha Leh oo ka soo kabsado biyo aad u burburay iPhone
Marka scan la dhammeeyo, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta laga helay waxaa ka mid ah on by mid ka mid ah natiijada scan. Markaas dooran wax kasta oo aad rabto in aad sii, oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u dhan badbaadin on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ma aha oo kaliya jira xog ku saabsan biyo aad u burburay iPhone, waxa kale oo ka heli kartaa macluumaadka lumay (muujiyay cas) ka iPhone.
# 4. Ka kaabta Lugood / iCloud soo kabsado Data
Tixgeli natiijadii ugu xumeyd, biyaha waxyeelo iPhone karo lama hagaajin iyo ma waxaad ka heli kartaa xogta ku yaal. Maxaa la samayn karaa? Haddii aad weligaa lahaa Lugood ama iCloud gurmad, wali waxaad ka heli kartaa macluumaadka hore, xitaa aadan qorsheeyo si aad u iibsato iPhone cusub. Sidee? Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) weli waa mid waxtar leh. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro dhammaan xogta laga file gurmad ah oo aad u eegista ku eegaan karo iyo dhoofinta wax kasta oo aad rabto.
Kabsado xogta iPhone kaga imaanayo Lugood
Tallaabada 1. Dooro "kabsado Lugood ee kaabta faylasha" ka dib markii ay Dr.Fone ee macruufka.
Tallaabada 2. Waxaad arki doonaa oo dhan Lugood files gurmad on your computer halkan. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo guji "Start Scan" badhanka si ay u helaan waxa ay soo bixiyay.
Tallaabada 3. Marka saarida yahay in ka badan, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta iyo eegista soo kabsado kasta oo aad rabto in aad your computer.
Kabsado xogta iPhone kaga imaanayo iCloud
Tallaabada 1. noqda "kabsado iCloud ee kaabta faylasha" on sare ee suuqa kala barnaamijka.
Tallaabada 2. Log in aad xisaabta iCloud iyo dooran gurmad ah ee aad iPhone. Markaasaa waxaa u dejisan.
Tallaabada 3. Ka dib download ah, iskaan karaan si ay u soo saaro, ka dibna ku eegaan ceshan wax kasta oo aad rabto in aad ka gurmad ah si aad u computer.
Sida loo beddel iPhone Broken 5s / 5c / 5 Screen